﻿ ​‘चुनावमा गरेको वाचाअनुसारकै काम भइरहेकोछ’
इटहरीमा जनप्रतिनिधि चुनिएको एक वर्ष बढी भइसकेको छ । पाँच वर्षको समय लिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले प्राथमिकतामा सडक र पूर्वाधारलाई राखेका छन् । तर विभिन्न ठाउँको आवश्यकताअनुसार केही फरक योजनाहरुसमेत छन् । एक वर्षको स्थानिय तहको विकासको प्रगती बारे इटहरीको वडानम्बर–१७ का वडाध्यक्ष भगवानलाल साहुसँग न्यूजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी :
अहिले हामी २०७५\_७६ को योजना सञ्चालन गर्नका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दैछौँ । यसपछि यसलाई सम्झौता गर्न, बैकमा खाता खोल्न पठाउँदै छौँ । केहि उपभोक्ता समितिले काम सुरु गरेको छ । त्यसको अनुगमन, निरिक्षण गर्दैछौँ । यस्तै वडामा आएका जनताहरुको काम गर्दैछौँ ।
अहिले वडाको विकासको अवस्था राम्रो छ । अहिले बाटोघाटो बन्दै छ । हामीलाई २०७४÷७५ मा जति पनि बजेट परेको थियो । त्यसबाट बालग्रामदेखि लविपुरसम्म ४–५ वटा पिच बन्यो । त्यस्तै पकली कान्छी चोकमा पनि कालोपत्रे गरायौँ । धेरै ठाउँका बाटोहरु कालोपत्रे गरेका छौँ । हामीले यो १७ नं. वडालाई हिलो मुक्त गर्ने हिसाबले गिट्टी पनि हाल्दै छौँ ।
वडामा विकासको कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
विकासको लागि बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छौँ ।
वडाका मुख्य समस्याहरु केके छन् ?
यो वडाको समस्या भनेका पुराना बाटोहरु हुन् । पुराना बाटाहरु नक्सामा कतै १० फिट कतै १२ फिट र कतै १८ फिट भएको हुँदा र अहिले हामीले न्युनतम ३० फिट देखि ३२ फिट सम्मको काम गर्दा त्यसलाई सीमांकन गर्न समस्या भइरहेको छ । अर्को समस्या भनेको वडाअध्यक्षले १० बजेदेखि ४ बजेसम्म बसेपछि कार्यालय बसेर काम गर्नु पर्दा विकासको काममा कम ध्यान दिनु परेको छ ।
कर्मचारीले कत्तीको सहयोग गरिरहेका छन् ?
यो वडामा सिमित कर्मचारी छन् । तर जति छन् काम गरिहेका छन् । यहाँ कर्मचारीको अभाव छ । दरबन्दीअनुसार ७–८ जना हुनु पर्नेमा ४ जना मात्र कर्मचारी छन् । एक कर्मचारीलाई धेरै कामको भार परिरहेको छ ।
तपाईले चुनाव अगाडि केके आश्वासन दिनु भएको थियो र के–के पुरा गर्नु भयो ?
आश्वासन त यिनै त थियो, विकास गर्छु राम्रो गर्छु भनेको थिए गर्दै पनि छु । विकासको काममा लागि परेको छु । अब एक–दुई ठाउँमा किटान गरेर डुबानको समस्या छ, त्यो समस्या समाधान गर्छु । जहाँ जहाँ बाटोको समस्या छ, समाधान गर्छु । र स्वास्थ्यदेखि लिएर शिक्षाको पनि समस्या समाधान गर्छु ।
यो वडाको विकासका लागि कोसँग के आग्रह र माग राख्नु भएको छ ?
नगरपालिकाले हामीलाई वडास्तरीय बजेट पनि दिइनै हाल्छ । नगरबाहेक हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि वडाको विकासको लागि माग राखेका छौँ । अहिलेसम्म प्रदेशको एउटा बजेट परेको हल्ला आएको छ तर चिठ्ठी नआइ थाहा हुन्न । यो वडाको एउटा बाटोको लागि बजेट परेको सुन्नमा आएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधि सभासद सीताराम मेहेताले पनि लविपुरको बजार व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको सुनेका छौँ ।
के भयो भने यो वडाको विकास चाँडो हुन्छ ?
काम गरेपछि नै विकास हुने हो । हामी त्यहि काम गर्दै छौं, लागि परेका छौँ विकास निर्माणका लागि । तर विकास गर्नलाई सबैभन्दा पहिला बजेटकै खाँचो हुन्छ । नगरपालिकाको सिमित स्रोतबाट हामीलाई वडास्तरीय बजेट आउँछ । त्यहि बजेटबाट हामीले विकास निर्माणको काम गर्ने हो । त्यो बजेटबाट बाटोमा गीट्टीदेखि लिएर ड्रेनसम्मको कामहरु गर्छौं । त्यस्तै नगरस्तरीय योजनामा प्रायः कालोपत्रे परेको छ । काम भइरहेको छ ।
यो वडाकै जनताले मलाई सहयोग गरेर आउनु भएको छ । वाहाहरुसँग अरुपनि सहयोगको आशा गरेको छु ।